Fil d'actualités du 24/05/2018
24/05/2018 - 11:00 : BAOLINA KITRA: Hanainga anio hihazo an'i Afrika Atsimo hiatrika ny Cosafa Cup ny Barea, ka mpilalao 25 no mandrafitra azy.
24/05/2018 - 10:30 : FANAFOANANA NY ZES: Sampan-draharaha telo karazana dia ny fananan-tany, ny fandrefesan-tany ary ny fanajariana ny tany no mitokona 100% manerana ny nosy. Mangataka izy ireo ny hanafoanana ny lalàna momba ny ZES.
24/05/2018 - 10:00 : FAHASALAMANA: Hisy fahatongavan'ny dokotera sinoa hanao fizahana ara-pahasalamana momba ny fahitrana sy fandidiana maso eto amintsika ny 31 mey hatramin'ny 9 jona izao.
24/05/2018 - 09:30 : TARIKA VONINAVOKO: Marary mafy tsy mahatsiaro tena etsy amin'ny Hopitaly HJRA Ampefiloha i Dadagaby na Gabriel Rakotomavo Filoha mpanorina ny tarika Voninavoko, izay tsiahivina fa naiditra hopitaly nanomboka omaly.
24/05/2018 - 09:00 : FANISAM-BAHOAKA: Hanomboka amin'ny fomba ofisialy rahampitso 25 mey ny fanisam-bahoaka eto Madagasikara, ka mpiasa 45000 no hetsehina hanao izany manerana ny Nosy.
24/05/2018 - 08:30 : FAMATSIAM-BOLA: Nahazo vola 75 tapitrisa dolara avy amin'ny Banky iraisam-pirenena i Madagasikara, izay haompana amin'ny Fanatsarana ny fotodrafitrasa eto Antananarivo.
24/05/2018 - 08:00 : IEM: Manomboka anio eny amin'ny Hotely Carlton Anosy ny "Forum International" hiresahana s'y hampahafantarana ny Vina IEM (Initiative Émergence de Madagascar) novolavolain'i Andry Rajoelina.
23/05/2018 - 19:00 : TSIAZOTAFO: Maty avokoa ireo olona 4 tototry ny tany, ka ny 3 no efa hita ny razana, ary karohina kosa ny iray.
23/05/2018 - 15:45 : TSIAZOTAFO: Nianjera ny trano iray noravaina eo ampitan’ny Venic Tsiazotafo ka olona 5 no nianjera ny tao, ny 1 efa avotra fa ny 4 mbola sokirina ary efa eny an-toerana ny mpamonjy voina.
23/05/2018 - 13:00 : HERY RAJAONARIMAMPIANINA: Ny fifampiresahana ihany no vahaolana tokana hahafahantsika mamaha izao disadisa politika izao, ary ny fifidianana kosa no aoka hitsaran’ny olom-pirenena rehetra ny mpanao politika tsirairay avy, hoy izy.
Archive du 20171111
Kidnapping teny Ambatobe Voatonona indray ny mpitandro ny filaminana
Zazavavy kely iray no saika hisy haka an-keriny teny Ambatobe, eny amin’ny Lycée Français omaly tolakandro tokony ho tamin’ny 1ora sy sasany, saingy tsy tanteraka.
Famoriam-bahoaka Efa azo atao amin’izay
Ao anatin’ny ady atao amin’ny pesta dia nisy ny fivoriana tsy ara-potoana natao teto amin’ny lapan’i Mahazoarivo omaly tolakandro niarahan’ny mpikambana vitsivitsy avy ao amin’ny governemanta notarihin’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara ara-bola sy teknika.
Fanomezana kara-panondro maimaimpoana Nanolotra fitaovana 635 tapitrisa ariary ny PNUD
Nanolotra fitaovana mitentina 200 000 dolara na 635 000 000 Ariary ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana (PNUD) mba hanatanterahana ny tetikasa fanamboarana kara-panondro maimaimpoana amin’ireo distrika 119 manerana an’i Madagasikara.
DisTIM Antananarivo faha-4 Ho modely amin'ny fiatrehana ny fifidianana
“Ho modely amin'ny fomba fiasa amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny DisTIM na Tiako i Madagasikara ao amin'ny Boriborintany faha-4 eto Antananarivo Renivohitra”,
Ianareo no fantatray !
Dia lasa ny saiko ry Jean nandinika fa nadio sahady ny tanàna taorian’ilay sakorobe afak’omaly iny a ! Tsy nadio arak’ilay hevitra mety handraisanareo azy fa nangina sy toa nilamina tampoka teo ny sakoroka.
Hofoanana ny CLD isaky ny distrika Avadika “4x4” ho an’ny depiote ny vola ?
Loharanom-baovao iray avy ao an-dapan’ny Antenimieram-pirenena no nandrenesana fa mety hofoanana ny tetibola natokana ho an’ny fampandrosoana ifotony amin’ny alalan’ny CLD.
Olona milaza ho akaiky ny filoham-pirenena Mibodo tanin’olona ao Analavory
Tany mirefy 152 ha ao amin’ny fokontanin’Ambatomitsangana, kaominin’Analavory, faritra Itasy,
Malagasy mora handairan’ny “honohono” Hampikorontana ny firenena
Tsikaritra omaly zoma fa maro ny ankizy tsy nandeha nianatra. Nisy ray aman-dreny nisafidy ny tsy handefa mihitsy ny zanany any an-tsekoly aloha taorian’ilay savorovoro vokatry ny tsaho teto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina ny alakamisy lasa teo.
Tetikasa “Asa avotra mirindra” Olona 4.000 nahazo tombontsoa
Ny teny amin’ny distrikan’Avaradrano sy Atsimondrano indray no nisitraka ny tetikasa “Asa avotra Mirindra” eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny mponina sy ny fampiroboroboana ny vehivavy tarihin’ny minisitra Onitiana Realy.
Vondron’ny Taxi Matihanina Vonona hiasa miaraka amin’ny CUA
Nampahafatarina tetsy amin’ny Mon gouter Andrefanambohijanahary omaly ny fitsanganan’ny VTM na ny vondron’ny taxi matihanina, izay mankato ny fandaminan’ny avy eo anivon’ny fiadidiana ny kaominin’Antananarivo Renivohitra na ny CUA ho fanatsarana ny tontolon’ny fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra.
Fitsirihana eny amin’ny OMAVET Mitombo isa hatrany ireo resy lahatra
Mbola mitohy hatrany amin’izao ilay raharaha hifanolanan’ny fikambanan’ny taxi (FTAR) sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra mikasika ny fanovana ilay lanterne kely ho lehibe sy ilay fitsirihana tsy maintsy tanterahin’ny fiarakaretsaka eny anivon’ny OMAVET ho fiarovana ny ain’ny mpanjifa. Amin’ny ankapobeny dia ireo efa tena ratsy no matahotra ny fampiharana ireo fanovana vaovao ireo.
“Kits scolaires” avy amin’ny AIRTEL Mpianatra 350 isa indray no nisitraka azy
Tsy nanadino ireo ankizy madinika manovo fahalalana eny anivon’ny sekolim-panjakana ny orinasam-pifandraisana Airtel amin’izao fanombohan’ny taom-pianarana 2017-2018 izao.
Ankazo Mahitsy Vita ny tohadrano tao Andohanosy
Voatery miavo-tena ny vahoaka ao amin’ny kaominina Mahitsy noho ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra eny an-toerana.
Gégé Bosco Manakiana mafy ny Komity Olimpika Malagasy
Mibaribary toy ny tafika andrefan-tanàna ankehitriny ny haratsiam-panahin’ny Komity Olimpika Malagasy tarihan’Atoa Siteny Andrianasoloniaiko amin’ny fanakorontanana indray ny fitantanana ny taranja ady totohondry Malagasy noho ny tsy fitiavana manokana ny tenako, hoy Atoa Andriamanampisoa Gégé Bosco filoha lefitry ny Federasion’ny Ady totohodry Malagasy.
Rallye RIM andiany faha-38 Nitorajofo ara-bakiteny i Mahamasina
Nitorajofo ara-bakiteny ny teo amin’ny piste fihazakahana teo amin’ny kianjaben’i Mahamasina omaly nanombohana ny rallye RIM andiany faha-38 izay tafiditra amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara amin’ity taranja ity taona 2017.
Poules des As « Champion’s League Malagasy » Tena ho lalao famaranana ny an’i CNaPS sy ny Elgeco Plus
Mitarika amin’ny isa 15 ankehitriny ny ekipan’ny CNaPS Sport ary manana isa 12 kosa ny Elgeco Plus manaraka azy taorian’ny fahavitan’ny andro faha-2 n-ny « poules des As » lalao miverina notontosaina tao Fianarantsoa omaly.
Edito Tsy tia mandroso intsony
Seza, volabe, voninahitra hihomehezan’izao tontolo izao fa hisolelahan’ny mpiray tanindrazana mila ranondranony amin’ireo be palitao sy manana fahefana hahafahana mandrombaka fahefana eto izany sisa izao no mba hany heverin’ny ankamaroan’ny mpitondra isan-tsokajiny sy lasa hanabeazany an-kolaka ny vahoaka ho fandrosoana.
Vahinala Raharinirina Hery lehibe ho an’ny toekarena ny diaspora
Iray amin’ireo zanaka ampielezan’i Madagasikara mipetraka any Frantsa i Vahinala Raharinirina, niala teto Madagasikara nanomboka ny taona 2002. Nandalo teto Madagasikara kosa izy nandritra ny Fikaonandohan’ireo Zanaka ampielezan’i Madagasikara ny 26-28 oktobra teo,
Fizarana “kits scolaires” Notohizan’i “Faly Roi Lion” tao Arivonimamo
Taorian’ny tao Imerintsiatosika dia tany Arivonimamo tao amin’ny kaominina Morarano indray no nanatanterahan’i Faly Andrianafetra Robinson na i Faly Be (Le Roi Lion) tompon’ny SRK eny Imerintsiatosika ny fizarana “Kits scolaires”, sac à dos, cahie, penina,,...
Fetin’ny noely sy ny faran’ny taona Hampilalao ny fianakaviana ny zava-pisotro “Caprice”
Hampilalao ny isam-pianakaviana indray ny zava-pisotro Caprice manomboka izao no fanamarihana ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona. “Family Chef caprice” no anarana nampitondraina ny hetsika.
Fanaraha-maso ny fonja Taraiky ny fampitam-baovao
Taorian’ny fahavakisan’ny fonja tao Ambato izay nahatafaporitsaka voafonja miisa 11 sy ny fonjan’i Tsiafahy, nahatafaporitsaka voafonja miisa 5 ary 1 tao Ankazobe dia mbola 2 tamin’ireto 16 tafatsoaka ireto ihany aloha izany hatreto no efa voasambotra,